Araka ny fomban-drazana dia nankalazaina ny alatsinainy 04 aprily 2011 teo ny taom-baovaon’ny malagasy. Raha ny lovan-tsofina no asiana resaka dia voalaza fa eo amin’ny fifandrifian’ny tsinam-bolana sy ny masoandro amin’ny andian-kintana (constellations) alahamady (bélier) no voafaritra fa fotoan’izay Asaramanitra izany. Marihina moa fa manodidididina ny fararano eo foana izy io tato ho ato izay.
Raha zohina anefa dia ny alahady faha 03 aprily 2011 hariva tokony ho tamin’ny 5 ora sy 33 minitra no tsinana ny volana. Ary raha ny fomba fanao nolovaina tamin’ireo ntaolo dia raha alohan’ny mitatao vovonana no tsinana ny volana dia iny andro mahatsinana azy iny no andro voalohan’ny fanjava (mois) fa raha kosa aorian’ny mitatao vovonana izany dia ny andro manaraka aorian’ny misasakalina manaraka no andro voalohany.
Ho an’ireo izay mandrafitra alimanaka malagasy izany dia ny alatsinainy 04 aprily 2011 no Vava alahamady Fanjava Alahamady (« premier jour du premier mois de l’année malagasy »)
Maro ireo fombafomba fanao rehefa tonga ohatra izao ny taom-baovao malagasy, misy ny afo tsy maty, ny fandroana sy ny sisa. Samy manana ny heviny ireny soatoavina ireny fa ny anisan’ny nampiavaka ity fankalazana farany ity dia ny fiaraha-niombom-bavaka teny amin’ny fiangonana FJKM Ambohidrabiby ny alahady 03 april lasa teo. Marika izany fa na ny fanisana andro gregorianina no ampiasaina na ny an’ny tatsinanana toy ny an’ny sinoa na ny an’ny arabo na ny an’ny malagasy dia fanisan’andro fotsiny ihany izy ireny fa tsy azo lazaina hoe fanopoan-tsampy akory. Nefa tandremo, misy ireo karazana fomba fomba sasany atao no tsy dia mety loatra amin’ny fivavahana kristianina ka mila lanjalanjaina tsara.
Ka dia :
« Sambasamba Andriamanitra Andriananahary, tratry ny taona vaovao, dia ho samy tratry ny arivo taona mitsingeringerina e! »
15 avril 2011 à 0:38
Adala izay tsa magnaja ny azy. Samy manaja ny fomban-drazany daholo na iza na iza foko eto an-tany. Koa tsy tokony hitsanga-menatra ny Malagasy hanasina ny azy ary hanandratra avo ny izany.Tokony tsy haka tahaka be fahatany ny an’ny hafa nefa tokony haka izay tsara ho tahafina amin’ny hafa koa mba hanatsarana ny an’ny tena.
20 avril 2011 à 13:01
Fa iza ihany izany no tena daty tena izy amin’izy telo mitranga isan-taona ireo e?
Ny an’ny sinoa izao fantampatatra hoe eo amin’ny manodidina ny fin janvier début février eo.
Ny an’ny tandrefana izao io efa iainanantsika isan’andro aminn’ny 1 janvier io.
Dia tsy aleo ve mifanaraka e?
Anio 31 Martsa 2014 no fankalazana ny Taom-baovao Malagasy eny Ambohodrabiby sy vohitra maromaro eto Iarivo niarahana tamin’ny solon-tenan’ny avy any anindran-tany. Ny fiombonana no zava-dehibe amin’ny fankalazana izany. Ny hevitra sy ezaka fambiombonana ny rehetra efa mandeha any ambadika any, fa tsy maintsy misy moa zany ny mamalan-kira foana eto amin’ity Madagasikara ity. Tsotra ny teniko: Ny akanga maro tsy vakin’amboa, ny mitabe tsy lanin’ny mamba…. Aza miala amin’ny maro ry zareo mbola tsy resy lahatra.
Etoana dia mamerina ny firariantsoa fanaon’ireo razantsika hoe: « Sambasamba Andriamanitra Andriananahary, tratry ny taona vaovao, dia ho samy tratry ny arivo taona mitsingeringerina e! »